GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Moore Portuguese Romanian Setswana Shona Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Ukrainian Urdu Zulu
MGBE Jisọs dị afọ 12 ji obi ike gwa ndị ndú okpukpe nọ na Jerusalem okwu, “ibobo nghọta Ya na ọzịza nile Ya [nwụrụ] ndị nile nụrụ okwu Ya n’ahụ.” (Luk 2:47) N’otu aka ahụ taa, ọtụtụ ndị ohu Jehova na-eto eto na-enwe obi ike ịgwa ndị nkụzi ha na ụmụ akwụkwọ ibe ha okwu banyere Chineke na Bible, ọtụtụ mgbe ha na-arụpụtakwa ihe ndị na-enye obi ụtọ.
Tiffany, dị afọ 14, nọ n’ihe ọmụmụ klas a nọ nwee otu mkparịta ụka dabeere n’amụma Bible nke izu 70 nke afọ, bụ́ nke a na-achọta na Daniel 9:24-27. Onye nkụzi ahụ kwuru isi ihe ole na ole banyere amaokwu ndị ahụ ma gafere isiokwu ahụ ozugbo.
Na mbụ, Tiffany lara azụ iweli aka ya elu. “Ma n’ihi ihe ụfọdụ,” ka ọ na-ekwu, “o wutere m n’ezie na a kọwaghị amaokwu ndị ahụ n’ụzọ zuru ezu. Eweliri m aka na mberede.” O juru onye nkụzi ahụ anya na e nwere n’ezie onye nwere ihe ọ ga-ekwu n’isiokwu ahụ, ebe ọ bụ na o siiri ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụ akwụkwọ ahụ ike ịghọta ya.
Mgbe e nyere ya ohere ka ọ kọwaa amụma ahụ, Tiffany biliri ọtọ ma kwuo okwu n’ejighị ihe odide ọ bụla. Mgbe o kwusịrị, klas ahụ dara nnọọ jụụ. Ahụ eruchaghị Tiffany ala. Mgbe ahụ, ndị klas ahụ malitere ịkụ aka ruo ogologo oge.
“Nke ahụ amaka, Tiffany, ọ maka,” ka onye nkụzi ahụ kwughachiri ugboro ugboro. O kwetara na ya maara na a ghaghị inwe ihe dị ukwuu amaokwu ndị ahụ pụtara, ma Tiffany bụ onye mbụ kọwatụụrụla ya ha, n’ụzọ doro nnọọ anya. Mgbe a mụchara ihe ọmụmụ ahụ, ọ jụrụ Tiffany otú o si mara ihe dị ukwuu otú ahụ banyere Bible.
“Ọ bụ n’ihi na abụ m otu n’ime Ndịàmà Jehova,” ka ọ zaghachiri. “Ndị mụrụ m kọwaara m amụma ahụ ọtụtụ ugboro tupu m ghọta ya.”
Ihe ọmụma Bible o nwere jukwara ụmụ klas ya anya. Otu nwa akwụkwọ gwara Tiffany sị: “Ugbu a ka m matara ihe mere unu bụ́ Ndịàmà Jehova ji aga site n’ọnụ ụzọ ruo n’ọnụ ụzọ; ọ bụ n’ihi na unu maara ihe dị ukwuu banyere Bible.” Ndị ọzọ kwere nkwa na ha agaghị achọkwa ya okwu ọzọ n’ihi nkwenkwe ya.
Mgbe Tiffany gwara ndị mụrụ ya banyere ahụmahụ o nwere, ha tụọrọ ya aro ka o nye onye nkụzi ya akwụkwọ bụ́ Ihe Ọmụma nke Na-eduba ná Ndụ Ebighị Ebi. Mgbe o mere nke ahụ ma gosi onye nkụzi ahụ ebe a kọwara amụma Daniel, ọ naara akwụkwọ ahụ ozugbo ma kelee ya maka ya.
N’ezie, mgbe ndị ntorobịa bụ́ ndị Kraịst ji obi ike na-ekwu banyere ihe ndị mụrụ ha kụziiri ha banyere Chineke na Bible, ha na-ewetara Jehova otuto na nsọpụrụ, na-ewetakwara onwe ha ngọzi.—Matiu 21:15, 16.